RCGP အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ RCGP အသိအမှတ်ပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
2017 ခုနှစ်မှစ၍ The Reward Foundation သည် United Kingdom ၏ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များကောလိပ်မှ အသိအမှတ်ပြုသည့် တစ်ရက်တာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ပေးအပ်ရန်အတွက် RCGP အသိအမှတ်ပြုအဆင့်အတန်းကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်အလုပ်မဖြစ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝရက်ကြာဗားရှင်းနှင့်တစ်ဝက်ရက်ကြာဗားရှင်း7ခရက်ဒစ်အဘို့အ4CPD မှတ်ပေးပါသည်။ သငျသညျအသီးအသီးသင်တန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူသို့မဟုတ်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဘွတ်ကင်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ် ဒီ link.
RCGP သည်မူလကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင်ထူးချွန်မှုမြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသောမိသားစုဆရာဝန်များအတွက်ကျွမ်းကျင်သောအသင်း ၀ င်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။ အထွေထွေ Practitioner (GP) အနေဖြင့်သင်၏ဗဟုသုတကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆက်လက်၍ Professional Development (CPD) မှတစ်ဆင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုခေတ်မီအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏သက်တမ်းတိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှစ်စဉ်ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန်ခရက်ဒစ် (၅၀) ယူရန်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါ တည်မြဲသည့် Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် core အခြေခံမူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်ကောလိပ်၏အကယ်ဒမီမှမိမိတို့ CPD ဆောင်ရွက်ရန်သင့်တယ်ဘယ်လိုဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအပေါ်လမ်းညွှန်မှုပေးစွမ်းသည်။ ဒီသင်တန်းကိုအောက်ပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်ကောလိပ်၏အဖွဲ့ဝင်များအတွက် CPD ခရက်ဒစ်ရရှိမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်:
ကလေးအထူးကု & ကလေးကျန်းမာရေးတော်ဝင်ကောလိပ်
Edinburgh ၏ Physicians ၏တော်ဝင်ကောလိပ်
အိုင်ယာလန် Physicians ၏တော်ဝင်ကောလိပ်
လန်ဒန် Physicians ၏တော်ဝင်ကောလိပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းကိုလည်းရှေ့နေများက, educationalists နှင့်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှဖွင့်လှစ်သည်။ စကော့တလန်၏ပညတ္ Society က၎င်းတို့၏ Self-လက်မှတ် protocol ကိုအောက်မှာ CPD ထိုသို့လက်ခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ရက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ CPD ခရက်ဒစ်၏နာရီ6မှအပ်နှံမျက်နှာ-to-မျက်နှာသင်ကြားရေးနှင့် Pre-သင်တန်းစာဖတ်ခြင်း၏တစ်နာရီ၏7နာရီပေးထားပါတယ်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ ရက်ဝက်ဗားရှင်းကို တောင်းဆိုချက်အရ ရနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တန်းအပြည့်အစုံကို2ရက်အတွင်း ရက်ဝက်သင်တန်းများအဖြစ် သို့မဟုတ်2နာရီသင်တန်းများ3ရက်အတွင်း ပို့ချပေးနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းအကြောင်းအရာအပြည့်အဝသက်သေအထောက်အထား-based ဖြစ်ပါတယ်ရောင်ပြန်သင်ယူမှုနှင့်ဆွေးနွေးမှုအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာဖုံးလွှမ်း:
စွဲနှင့် ပတ်သက်. ဦးနှောက်အခြေခံ
စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု - လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်
ကုသမှု options များ
အကယ်၍ The Reward Foundation သည်ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအားသင်၏လေ့ကျင့်မှု၊ တော်ဝင်ကောလိပ်နှင့်ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့သို့ပို့စေလိုပါကဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်စုတစ်ခုပေးပါ။ ယူအက်စ်အေနှင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းတွင်သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိသည်။